Ciidan Dawladeed mise Mooryaan? | KEYDMEDIA ONLINE
Ciidan Dawladeed mise Mooryaan?
Muqdisho (Keydmedia) - Iyadoo Ciidamada Dowladda KMG-ka ah ay howlgallo ka wadaan meelo kala duwan oo ka tirsan degmooyinka Gobolka Banaaadir ayaa hadana waxaa isasoo tareysa Gabboodfallada iyo tacaddiyada ay Qaar kamid ah Askartaasi kula kacayaan Dadka rayidka ah.
Keydmedia ayaa Baaritaanno ku sameysay fal Naxariista ka baxsan oo dhawaan Askari ka tirsan Ciidamada Dowladda KMG-ka ah ku toogtay macallin Iskuul oo lagu Magacaabo Wiish kaasoo ku sugnaa Dhisme ku yaalla Suuqa Xoolaha ee Degmada Heliwaa.
C-Fitaax Xasan oo walaal la ah Wiilka la dilay ayaa noo xaqiijiyay in Askariga dilay Macallinkaasi ay la socdeen Afar kale oo ku hubeysan hubka nuucyadiisa kala duwan islamrkaasna ay ka qaateen lacag dhan 500 Doller taasoo uu doonayay in qeybo kamid ah uu siiyo Shaqaale u dhammeystiray Guri uu dhawaan ka dhistay Degmada Heliwaa.
Cabdifitaax ayaa intaasi ku daray in markii lacagta laga qaatay marxuumka geeriyooday uu isku dayay inuu dabagalo Askartaas kadibna rasaas wadnaha lagala beegsaday.
Ma jirto illaa iyo xilligaan Saraakiil ka tirsan Ciidamada Dowladda KMG-ka ah oo ka hadashay falkaasi naxariista ka baxsan. Mana jirta Mas'uuliyiin ka tirsan Dowlada oo arintaas baartay.
Sidoo kale waxaa Gelinkii dame ee Shalay Askari ka tirsan Ciidamada Dowladda uu ku dilay Isgoyska Sanca Nin Darawal ahaa xilli uu ka dhego adeegay inuu qaato ammar uu siinayay Askariga kaasoo ku qasbay inuu si degdeg ah ku joojiyo garaiga uu kaxeynayay, sida ay Keydmedia u xaqiijiyeen dad Goobjoogeyaal ah.
Askariga Dilka geystay ayaa durbadiiba ka baxsaday goobta waxa ayna falalkaani noqonayaan kuwo lumin kara niyadda ay Shacbiga u hayaan Ciidamada ka qeybqaatay in Magaalada Caasimadda ah laga saaro Al-Shabab haddii aysan wax ka qaban dowladda KMG-ka ah.
"Ciidamadaan waxaa lagu xulay nidaam xaraan ah oo Dadka u yaqaaniin 4.5, kuwa soo xulay waxey caan ku yihiin Musuq Maasuqa, Burcadnimada iyo Qabiil kalkaalida, waxeyna doonayaan iney wiiqiyaan xoogaaga yar oo Nabada ah oo Shacbiga Soomaaliyeed usoo hoyatay" Sidaas waxaa jiri Xildhibaan codsaday in Magaciisa aan loo adeegsan Warbaahinta.
Dhanka kale waxaa dhacdo la yaab ah oo aan maalmahan looga baran Ciidamada noqotay in Askar ka tirsan Ciidamada ay faraxumeeyaan ama kufsadaan Gabar Soomaaliyeed oo ku nool xaafadda waxarcadde ee degmada Hilwaa maadaama ay kamid aheyd gabadhaasi dad fara ku tiris ah oo ku noolaa xaafaddaasi, sidaasna waxaa Keydmedia u xaqiijiyay Goobjoogeyaal codsaday in magacooda aan loo adeegsan warbaahinta sababo la xiriira xagga amnigooda.
Keydmedia oo Wareysi la yeelatay qaar kamid ah Haween loo geytsay kufsi ayaa Haweenkaas ay sheegeen in ey ku noolyihiin baqdin iyo walwal ay kabaqayaan iney mar kale la kulmaan ragii kufsadey. Wareysiga oo Kaamilsan Fillo dhawaan.
Laakiin Aqriste Mushaar la'aan miyaa falalkaas loo sameeyaa?
Arrimahaan oo dhan aya amarkii la isku soo duubo waxa ay noqonayaan falal ka baxsan Bani’aadaninimada iyo Shareecada Islaamka iyadoo loo baahanyahay in tallaabooyin wax ku ool ah laga qaado Askarta nuucaas ah eek u lug leh Ciidamada Dowladda.
Keydmedia Editorial Desk - Mogadishu